Xulka Brazil Oo ka Talaabsaday Mexico Iyo Ciyaaryananada Keenay Guusha Soo Daahday Ee Xulka Rio De Janeiro+Sawiro | Saxil News Network
Xulka Brazil Oo ka Talaabsaday Mexico Iyo Ciyaaryananada Keenay Guusha Soo Daahday Ee Xulka Rio De Janeiro+Sawiro
July 2, 2018 - Written by editor
Xulka Dalka Brazil ayaa guul soo daahday oo dhib badan ka gaadhay xulka dalka Mexico oo ay wada ciyaareen kulan ka tirsan wareega 16-ka ee koobka aduunka ee ka socda dalka Ruushka.
Xulka Brazil oo ay sanadkan u dheelayaan ciyaaryahano tayadoodu sarayso isla markaana damacsan inay iska maydhaan ceebtii ka gaadhay koobkii aduunka ee sanadkii 2014-kiilagu qabtay dalkooda ayaa dedaal ugu jira inay hantiyaan koobka.
Ciyaarta ay la yeesheen xulka Mexico ayey laacibiinta Brazil gaadheen guul ay dedaal badan galiyeen qaybtii labaad ee ciyaarta ka dib markii ay qaybtii hore ku
dhamaatay goolal la,aan aanay labada xulba u suura galin inay wax gool ah dhaliyaan.
Daqiiqadii 51aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu weeraryahanka hogaaminaya xulka Brazil ee Neymar waxa uu dhaliyey goolka koowaad ka dib markii uu kubad qurux badan ka helay Willian,kaas oo ciyaarta ka dhigay hal gool iyo waxba.
Daqiiqadii 89aad ee ciyaarta ayaa weeraryahanka Robert Firmino oo badal ku soo galay ciyaartu uu dhaliyey goolka labaad ee xulka Brazil ka dib markii uu ka faa,iideeyey baas uu ka helay Neymar.
Ciyaartii dhex martay Brazil iyo Mexico ayaa ku soo dhamaatay laba gool iyo waxba ay guushu raacday xulka Brazil, kaas oo wareega 8 dhamaadka la ciyaari doona midkii soo baxa xulalka Belgium iyo Japan.